မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: လိုက်ဖက်တဲ့ ဘ၀ နဲ့ မင်း (My first Project)
Posted by mabaydar at 2:03 PM
I'll call u when I get married :))
Great job! ma bay dar. Can i get Quotation? :)
Great Job. For the beginning, it is pretty good. Although there is no other crew members and you can produce like that is already good enough ... Keep it up. Wanna watch more.
haha... my Quotation as below...
1) Currently free of charges
2) The shooting will take place depend on my availability
3) Must listen and follow strictly to my instruction during shooting
4) I will not be responsible for make up but performers should wear proper and necessary make up
5) The video shooting must done 1 month prior to actual event. That means you have to let me know more than 1 month earlier.
6) Must give me song that u wanna use in the MV
7) copyright issue of that song is solely depend on you (can't change last mins.. but depend on situation)
8) I have right to share those videos that I directed on my blog and my facebook and have right to upload on any site on internet.
9) I have right to change or add in anything whenever necessary in this quotation... :)
Making of Video ကိုအကြိုက်ဆုံးပဲ။ Hee Hee:D မဗေဒါ တော်တော်ရီစရာပြောနိုင်တယ်။ အဲ့ဒါကြောင့်လဲ သရုပ်ဆောင်တွေက ပိုသဘာဝကျကျဆောင်နိုင်တာဖြစ်မှာ။ ကိုယ်တွေ့။
မမ .. တော်တော်ကြိုးစားထားတာပဲ... အရမ်းကြိုက်တယ်.. ကန်ဒီလဲ ၀ါသနာပါတယ်.. ဒါပေမယ့်.. ကိုယ်ရိုက်တာကိုလည်း သရုပ်ဆောင်ပေးမယ့်လူကရှိဦးမှ မလား.. အဲ့တော့ လောလောဆယ် ကိုယ်ဟာကိုယ်ပဲ သရုပ်ဆောင်ပြီး ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲ ရိုက်နေတယ်.. ဟီး.. :D
6/17/2011 10:22 PM
that was so cool. keep up the good job sis. *salute* your creativity.
ရိုက်ထားတာလေးတွေက ကင်မရာမင်း တော်တယ် ပြောရမှာပါ ကြည့်လို့ကောင်းပါတယ် သရုပ်ဆောင်တွေကလဲ မင်းသားမင်းသမီးတွေမဟုတ်တဲ့အတွက် လိုနေတာတွေ ရှိတာပြောစရာမလိုပါဘုး သတိုးသမီး ၀တ်ထားတာလေးတော့ပြောစရာရှိပါတယ် ၀တ်ထားတဲ့ ဂါဝန်ကြောင့် အပြင်မှာမ၀ ဘုးဆိုတာသိပေမဲ့ ဒီ video ထဲမှာကြည့်ရတာ တော်တော်ဝနေသလို ဂါဝန်ဟာလဲ မပေါ်လွင်ပါဘုး သတိုးသားကလဲ အထင်ပေါ်ကြီးမဟုတ်တောင် သားနားစွာဝတ်ဆင်သင့်တယ်လို့ မြင်ပါတယ် လုအများကြည့်ရှု့မှာဖြစ်တဲ့အတွက် ဒါရိုက်တာ လုပ်မဲ့မဗေဒါ နောက်ရိုက်မယ်ဆိုရင် ပေါ်လွင်အောင် အ၀တ်စားကို ရွေးချယ်ပေးစေချင်ပါတယ် ဖြစ်နိုင်ရင် မိုးမအုံ့တဲ့နေ့ နေပုပုမှာရိုက်ပါ ဒါမှမဟုတ် အလင်းရောင်အတွက် မှန်လို အလင်းပြန်တဲ့ အလုမီနီယံပြားကို အသုံးပြုပြီးရိုက်ရင် ကင်မရာမကောင်းလဲ ရုပ်တွေကြည်လင် ပြီး အလင်းရောင်ကောင်းစွာရမယ်လို့ ထင်ပါတယ် အကြံပေးတာပါ ကျွန်တော်က မဗေဒါရဲ့ စာတွေကိုအားပေးနေတဲ့ လုထဲကလုတစ်ယောက်ပါပဲ မဗေဒါ တိုးတက်ပါစေဗျာ ........ ခင်တဲ့ Bone
7/19/2011 2:56 AM
ဘွန်:ပြောတာ ထောက်ခံပါတယ်။ မိုးရွာနေတော့ အရောင်သိပ်မကောင်းဘူး။ မိတ်ကပ်မလိမ်းထားသလိုပဲ။ အကျီအရောင်တောက်တာဝတ်သင့်တယ်။ ဇတ်လမ်းလေးနဲ့ဆို ပိုကောင်းမယ်။ ပထမဆုံးဆိုတော့ အရမ်းကောင်းနေပါပြီ။ သူများမာလိုတာလေးတွေကြည့်ပြီ: ကိုယ့်ကျဖြည့်လို့ရပြီ။ ဒီတခါ လာမဲ့ တတွဲကတော့ နဲနဲ အရှက်မရှိဘူး။ ဒါရိုက်တာခိုင်းတာထက် ပိုမယ်လို့ထင်ရတာပဲ။ ဟားဟား
မင်းသားကို လွှင့်မာ သဘောတူမတူ မေးလိုက်အုန်းမယ် (သူက ကိုယ့်ထပ်ရုပ်နဲနဲပိုဆိုးတော့ ပြချင်မာ မဟုတ်ဘူး ဟိ) သဘောတူရင်တော့ ဘီစီဒီ ရိုက်မယ်။ ဇတ်လမ်းကရှိပြီ:သား။
သီချင်းနဲ့ ဗီဒီယို ဖိုင်ကတော့ လုပ်မယ်။ ဓတ်ပုံတွေရိုက်ပြီ: ငယ်ငယ်ကပုံတွေ စကန် ဖတ်ပြီ: ပို့ပေးမယ်။
အရမ်းကျေးကျေး ရေငတ်တုန်း ရေသန့်ဘူး Delivery ရောက်လာသလိုပဲ
12/28/2011 12:38 AM
ဟိုနေ့က သူငယ်ချင်း ဟာပဲကြည့်မိတယ်
မဗေဒါ အမ ဗီစီဒီ ဒီနေ့မှကြည့်ဖြစ်တယ်။ ဒါကို ပိုကြိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာလို့လဲမသိဘူး ညာဘတ်ချမ်းမာ နဲနဲ ပြတ်နေတယ် အကြီးချဲ့ကြည့်လို့ မရဘူး။ မဗေဒါတို့ ညီအမ ၃ယောက်လုံး ရုပ်တူတာပဲ
အဖြူရောင်လေးတွေ ပြုတ်ကျလာတာလဲ (Effect) ကြိုက်တယ်
အမှန်တော့ ဗွီဒီယိုပေါ် mouse တင်လိုက်ရင် ဘယ်အပေါ်ထောင့်မှာပေါ်လာတဲ့ လင်ခ့်ကိုနှိပ်ပြီး youtube မှာ သွားကြည့်လို့ရတယ်... ဒါပေမဲ့ ခုတော့ ဆိုဒ်ပြန်ချုံ့ပေးလိုက်ပြီဆိုတော့ ရပါပြီ... အဖြူအဖက်လေးတွေကျတဲ့ effect ဆိုတာ ဘာကိုပြောတာလဲ မသိဘူး...